Sacuudiga oo uu soo wajahay gabaabsi dhanka gantaallada ah+Sababta | Qaran News
Sacuudiga oo uu soo wajahay gabaabsi dhanka gantaallada ah+Sababta
Writen by Qaran News | 4:46 am 11th Jan, 2022
Iyadoo weerarrada Xuutiyiintu ay sii xoogeysanayaan, xukuumadda Riyadh ayaa la sheegay inay wajahayso xaalad deg deg ah iyadoo ay gabaabsi ka yihiin gantaallada duqeymaha cirka, sida uu weriyay wargeyska arrimaha dhaqaalaha ka faallooda ee Financial Times.
Sacuudiga ayaa la sheegay in laga yaabo inay bilo gudahood uga dhammaadaan gantaallada nooca difaacafa gantaallada, sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Mareykanka u dhashay, kaas oo uu soo xigtay Financial Times, tan oo sida la sheegay xukuumadda Riyadh ku kalliftay inay xulafadeeda gobolka ka codsato hub.
“Waa xaalad degdeg ah,” ayuu yiri sarkaalkan, isagoo intaas ku daray in Washington ay taageerto tallaabooyinka hubka looga dalbanayo dalalka Gacanka iyadoo Xuutiyiinta Yemen ay sii wadaan weerarrada xadka ka gudba ee ay ku qaadaan Boqtooyada Scauudiga.
“Waxaa jira meelo kale oo Gacanka ah oo ay ka heli karaan, waxaana isku dayeynaa inaan taas ka shaqeyno. Waxaa laga yaabaa inay u dhacdo si degdeg ah,” ayuu sarkaalkan Mareykanka yidhi
Ilo ka war hayay wada hadallada dhex maray Sacuudiga iyo dalalka deriskeeda ah ayaa wargeyska u xaqiijiyay in Riyaadh ay dirtay codsigaas.
“Waxaa jira gabaabsi dhanka gantaallada difaaca ah. Sacuudiga ayaa saaxiibadiis ka codsaday deyn,” ayuu mid ka mid ah ilahaas la soo xigtay u sheegay wargeyska.
Qofka labaad ee la soo xigtay ayaa sheegay in Dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu arrintaasi ku soo hadal qaadau shirka Golaha Iskaashiga Gacanka (GCC)oo lagu qabtay Riyadh bishii December isla markaana ay boqortooyadu si toos ah ula xiriirtay dalalka gacanka ku yaalla.
Ma cadda in dalalka deriska la ah Sacuudiga ay u suurto gashay inay hub siiyaan Sacuudiga, sida lagu sheegay warbixinta wargeyska Financial Times.
Sarkaal kale oo Mareykan ah ayaa sheegay in mucaaradka Xuutiyiinta, oo ay Iiraan taageerto isla markaana xukuma waqooyiga Yemen, ay sanadkii hore kordhiyeen weerarrada ay ku qaadaan Sacuudiga, iyagoo 375 weerarro ah ka geystay gudaha Sacuudiga, badankood waxaa lagu beegsaday xarumaha shidaalka, garoomada iyo magaalooyinka.
“Inay ka jawaabaan weerarradaas iyagoo adeegsanaya gantaalladaas difaaca waxay ka dhigan tahay inay si dhaqsi ah uga dhammaadaan,” ayuu yiri sarkaalkaas.
“Taasi waa wax ay tahay inaan la tacaalno jawaabta arrintaasna keliya maaha gantaallo badan oo difaac ah, balse jawaabtu waa in xal diblomaasiyadeed loo helo xasaradda Yemen.”
Xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka
Xaaladdan ayaa ka dhigan caqabaddii ugu dambeysay ee soo wajahda xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga, iyadoo maamulka Madaxweyne Joe Biden uu go’aansaday inuu xiriirkaasi isbeddel ku sameeyay sababo la xiriira dilkii October 2018 loo geystay weriyaha Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi oo shakhsiyaad u dhashay Sacuudiga ay ku dileen magaalada Istanbul.
Bishii February sanadkii hore, Biden ayaa sheegay inuu joojin doono in Sacuudiga uu ku taageero dagaalka Yemen, oo ay ka mid tahay huba uu ka iibiyo.
Balse dhowr bilood kaddib, maamulkiisa ayaa ansixiyay iibka hubka oo uu ku kacayo $650m oo laga iibinayo Sacuudiga.